अभिनेत्रीद्धय शर्लिन चोपडा र शिल्पा शेट्टीको भीषण लडाई, बलिउडमा भूइचालो
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » अभिनेत्रीद्धय शर्लिन चोपडा र शिल्पा शेट्टीको भीषण लडाई, बलिउडमा भूइचालो
मङ्गलबार १२ असोज, २०७८
काठमाडौं । चर्चित अभिनेत्री एवं मोडल शर्लिन चोपडा पछिल्ला दिनहरुमा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई लगातार निशाना बनाइरहेकी छिन् ।
शर्लिनले एक पटक फेरि शिल्पा शेट्टीबिरुद्ध बयान दिएकी छिन् । शर्लिनले ट्वीटरमा शिल्पाको आलोचना गरेकी हुन् ।
शिल्पा आफ्ना पति राज कुन्द्राको हर्कतबाट कुनै लज्जाबोध नभएको उनको भनाई रहेको छ । शर्लिनले शिल्पाको दर्शनलाई दण्डवत् गरेकी छिन् । प्रयोगकर्ताको एक ट्वीटमा टिप्पणी गर्दै शर्लिनले यस्तो बयान दिएकी हुन् ।
उनले भनेकी छिन्, ‘शिल्पा दीदीलाई आफ्नो पतिको काममा पश्चाताप छैन १ तपाईं ९शिल्पा० भन्नुहुन्छ कि उहाँको जीवन एक दर्शन छ । एक सेलिब्रिटीको रूपमा, तपाईं कहिल्यै गुनासो गर्नुहुन्न र व्याख्या गर्नुहुन्न, कृत्रिम पूजा गरिन्छ ।’
दोस्रो ट्वीटमा शिल्पाले एउटा न्यूज पोर्टलको ट्वीटको जवाफ दिइन् । जसमा यो लेखिएको छ कि शिल्पा शेट्टी राज कुन्द्रा द्वारा निर्मित भिडियोमा शर्लिनको काम को प्रशंसा गरिन् । जवाफमा शर्लिनले लेखिन्, ‘हो, एक पटक होइन तर धेरै पटक तारिफ गर्नुभयो ।
राज कुन्द्राले मलाई भने कि शिल्पाले मेरो तस्विर र भिडियोहरु देखेकी थिईन् । यी सबै कुरा शिल्पालाई निकै आकर्षक लाग्थ्यो ।
यसले मलाई प्रेरणा दियो । र म पहिले भन्दा राम्रो गर्नको लागी प्रेरित भएकी थिएँ ।’ शर्लिन चोपडाले लगातार शिल्पालाई निशाना बनाइरहेकी छिन् । तर गहना वसिष्ठले शर्लिनको निन्दा गरेकी छिन् । उनका अनुसार, शर्लिनले यो सबै चर्चामा रहनका लागि मात्रै गरिरहेकी छिन् ।
गणेश पाण्डेद्धारा निर्देशित ‘को–हजबेण्ड’ लाई युरोपको प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सवको अवार्ड
राजेश हमाल विजयादशमीमा यसकारण कहिलै टीका लगाउनुहुन्न
बलिउडका हस्ति अनुपम र परिणति नेपालको सगरमाथा देखेर दंग !
छोरा पक्राउ परेदेखि सुत्नै सकेका छैनन् शाहरुख र गौरी, एनसीबीलाई फोनमा यस्ता प्रश्न गर्छन्
शाहरुख खानको छोरालाई गिरफ्तार गर्ने समीर वानखेडेकी श्रीमतीको नायिका माथ ख्वाउने सुन्दरता
गायक शिव परियारले ‘पिउन सुरु गरेपछि’ ‘
सन्तान विग्रिए धनको के काम, विश्वकै धनी शाहरुखलाई छोरा ड्रग्स केसमा जेल जादा कस्तो भयो !
खुशीले सम्हालिन नसकेका मनोज गजुरेलको दोस्रो विवाहको उमंग [ ५ तस्विरमा हेर्नुहोस् ]
साँघुरो डेरामा बसेर संघर्ष गरेकी अभिनेत्री सरिताको आफ्नै आलिसान घरसम्मको सफता कसरी ?